သားသတ်လွတ်မုန်ညှင်းဖြူသုပ် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
Thursday, November 21, 2013 Taunzalat
မြေပဲလှော်...........................၁/၂ ခွက်( လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး)
နှမ်းလှော်.............................၂ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
ဆား+ ပာင်းခတ်မှုန်. ..............သင့်တော်သလို
ပဲကျက်မှုန်. .........................၂ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
ငရုတ်သီးလှော်မှုန်. ................၁ ဇွန်း(..............။....)
မုန်ညှင်းဖြူ ကို လေးစိတ်ခွဲပြီး..ဆားအနည်းငယ်ခပ်ထားတဲ့ရေနွေးဆူဆူမှာ
(၃) မိနစ်ခန်.ပြုတ်ပြီး..ရေအေးလောင်းပါ။ရေတွေကို ပြောင်စင်အောင်ညှစ်
ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူကိုရောပြီး..နနွင်းမှုန်.အနည်းငယ်နှင့်အတူဆီချက် ပါ။
ဇလုံတစ်ခုထဲမှာ..မုန်ညှင်းဖြူ ၊ မြေပဲထောင်း၊ ပဲမှုန်.အကျက်၊ ငရုတ်သီးလှော်
မှုန် . ၊ ဆား၊ ပာင်းခတ်မှုန်.တို.ထည့်ပြီး..သံပုရာရည်လေးညှစ်ကာ...